War Deg Deg Ah ” Dagaalka u dhaxeeya Puntiland iyo Al-Shabaab oo sii xoogeestay iyo Puntiland oo ka hadashay dagaalka socda – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
16th March 2016 MAREEG Af Soomaali 0
Wararka ka imaanaya Magaalada Garawe ee xarunta Gobolka Nugaal ayaa sheegaya in dagaalka u dhaxeeya Ciidamada maamulka Puntiland iyo kuwa Al-Shabaab ee saakay ka qarxay Deegaanka Suuj uu sii xoogeestay.
Ciidama aad u hubeesan oo wata gaadiid dagaal ayaa weerar ku qaaday Deegaano dhaca dhinaca Xeebta Gobolka Nugaal , waxaana Ciidamada Puntiland dagaal kala hortageen dagaalyahano katirsan Al-Shabaab oo ku sugnaa deegaano kuyaala dhinaca Xeebaha Gobolka Nugaal.
Dagaalka xoogiisa ayaa hada kasocda Deegaanka Suuj oo ku dhaw Deegaanka kale Garmaal oo hoostaga degmada Den gorayo ee gobolka Nugaal, waxaana Garmaal laga maqlayaa daryanka hubka ay is dhaafsanayaan labada Ciidan.
Wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Xasan Soocadde, oo goordhaw Warbaahinta kula hadlay magaalada Garawe, ayaa xaqiijiyay in Ciidamada Puntialnd ay weerar ku qaadeen deegaanka Suuj halkaasna uu dagaal culus ku dhaxmarayo Ciidamada Puntiland iyo Shabaabkii dhawaan ka degay Xeebta Garacad.
Mr Soocade , ayaa sheegay in dagaalka Socda ay ciidankooda ku gacan sareeyaan ayna qasaaro xoogan gaarsiiyeen dagaalyahanada hubeesan ee soo galay deeganada Puntiland, waxa uuna tilmaamay Wasiirka in wali howlgalku socdo ayna dib uga warbixin doonaan.
Wasiirka Warfaafinta ayaa ugu baaqay dagaalyahanada Al-Shabaab ee soo galay Deegaanada Puntiland in ay isa soo dhiibaan iyaga iyo hubkooda, waxa uuna balan qaaday cidii si nabad galyo isku soo dhiibta in lasoo dhaweyn doono wax shuuruud ahna aan lagu xiri doonin.
Xaalada Deegaano kuyaala dhinaca Xeebta Puntiland ayaa ah wali mid kacsan, waxaana laga cabsi qabaa in dagaalka uu ku faafo deegaano kale oo lasoo sheegayo in ay joogaan dagaalyahanada Al-Shabaab.
Ra’iisul Wasaaraha dalka oo la kulmay Ra’iisul Wasaaraha Talyaaniga”SAWIRRO”